PhD baan ka haystaa xisaabta hadana tiro afar ah iskuma qaybin karo! - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Clara Grima
Image caption Clara Grimais
Clara Grima waxay xasuusataa daqiiqadii ay goosatay in aanay bare jaamacadeed oo xisaabta keli ah dhiga aanay noqon ee, in ay xataa dadka jeclaysiiso.
Waxay ahayd 2011-kii markii inankeeda ugu yar, Ventura, oo markaa lix jir ahaa weydiiyey calaamad ku taalay funaanad ay xidhnayd, waxay tahay.
"Ma miis baa mise waa gool kubadeed?"
Wada hadalkoodkii wuxu ku dhamaaday in Ventura go'aansaday in "waxa aan dhamaadka lahayni yahay wax ay xisaabyahannadu ikhtiraaceen markii ay ka daaleen tirada".
Image caption Pi
"Waxay xisaabtu ku wanaagsan tahay waa fikirka, inaad wax u qabato si aan mishiinadu u shaqayn karin," ayay Grima BBC u sheegtay.
Buugeedii ugu dambeeyey oo la yidhaa "May mathematics be with you!" oo soo baxay 2018-kii wuxuu muujinayaa marxalado kala duwan oo ay suurto gal tahay in lagu helo xisaabta - tallaalka illaa Facebook.
Buuggii ugu dambeeyey waxaad ku sheegtay in xisaabtu ciyaar tahay oo aad u baahan tahay in aad "barato sidii aad u ciyaari lahayd". Maxay aragtidaa ciyaarta ah aysan dadka badankiisu u qabin?
In kasta oo ay adag tahay, waa inaan hadana qiraa in aanay xisaabtu sumacad fiican lahayn umana qalanto sidaa.
Waxaan cilmi baadhe iyo bare jaamacadeed ahaa illaa 1995 waxaanan bilaabay inaan xisaabta carruurta jeclaysiiyo sannadkii 2011-kii.
Waana sababtaa sida aan caruurta shan jirka ama lix jirka ah ula kulmo ee igu yidhaa ma jeclin xisaabta.
Had iyo goor waxaan weydiiyaa su'aal isku mid ah: "Hadaanad iskuba deyin maxaad ku ogaan kartaa?"
Ka dib ayaan ogaaday in carruurtu nacaybka xisaabtu galo iyagoo aan bilaabin ba sababtuna waa deegaanka ay ku nool yihiin iyo bulshada.
Way fiicantahay in uu qofku faano, in aanu xisaabta aqoon. Dadka caanka ayaa telefishannada iyo Youtub ka sheega.
Arintaasi caruurtay maanka ka gashaa.
Laakiin kiiskani kaagii maaha- had iyo goor waad jeclayd xisaabta oo xitaa mararka qaar noloshaadey "cuntay"
Haa waan jeclaa xisaabta ilaa markaan yaraa.
Aniga waxay ii ahayd ciyaar, wax la yaab ah ayey ii ahayd.
Waxaan si fiican u xasuustaa markii ugu horaysay ee aan isleeg ka shaqeeyey ah nooca x+2=4.
Waxaan xusuustaa aniga oo fasalka ka dhex qaylinaya: "kaalay arag! Wax baan ogaaday!"
Laakiin runtu waa in aan doonayey in aan noqdo faylasuuf, sidoo kale waxan jeclaa inaa wax qoro.
Macalinkaygii falsafada ayuu ahaa kii igu yidhi 'xisaabta baro waayo waad ku fiicnaa shaqana dhakhsaad ugu heli'.
Aad buu u saxnaa.
Image caption Graphs can explain social relations, including those on Facebook, Grima says
Waxa ugu horeeye ee xisaabtu i siisay waa is dhul dhigid, qabkaygii ayay si arxan darro ah iiga saartay sababta oo ah sidaan is moodayey ba maan ahayn.
Markaan ogaaday quruxda xisaabta ayaan bartay in aan si kale dunida u arko.
Garaaf waa shax xisaabeed oo ka samaysan laba urur; dhinco iyo jiitimo kuwaas oo isku xidha laba dhibcood.
Lahaanshaha sawirka Andrew Beveridge and Jie Shan
Facebook ayaan tusaale u soo qaadan karnaa. Qof kasta oo isticmaalaya waa dhibic, labada qof ee saaxiibka ku ahna waxa lagu muujiyaa xariijin isku xidha.
Waxaanay taasi ina tusaysaa sawirka: waana garaaf.
Gaeaafka wuu weynaan karaa sababtoo ah Facebook oo kale, dad laba bilyan oo qof ah baa adeegsada.
Laakiin waxa jira garaafyo yaryar: Hadalkayga waxaan ku sheegay in dhibic kasta noqon karto qof ka mid ah dadka goobta fadhiya.
Hadii laba ka mid ahi is garanayaana xariijin baad iskugu xidhaysaa.
Waxay taasi ku siinaysaa muuqaalka xidhiidhka bulsho ee jira.
Waxaan shahaadada jaamacadda qaatay anigoon arag garaaf.
laakiin markaan bilaabay inaan xisaabta dadka jeclaysiiyo ayaan si dhakhso a u bilaabay inaan garaafka ka hadlo.
Waxaan markaa ogaaday inuu yahay wax faa'iido badan oo kuu fududaynaya in aad si fiican u furfurto masalooyinka xisaabta - si aad u furfurtid xisaabaha kakan ee carruurta lagu qasbo in ay markasta ka shaqeeyaan.
Waxa jiro waa dhibaatada furfurista masalooyinka iyadoo la adeegsanayo garaaf iyo male, ma ahaan kartida xisaabinta oo run ahaantii ah wax lagu caajiso oo billaa faa'iido ah.
Kombuyuutarkaa si fiican u qabta.
Natiijada imtixaanka ee galaafatay nolasha 23 qof
Aniga mashiinka dharka ayaa si fiican wax iigu maydha, baabuurtaa si fiican u socdaala weligayna halkaa gaadhi maayo, isku darkana isagaa iga dhakhso badan.
Waxaan PHD ku haystaa xisaabta hadana iskuma qaybin karo tiro sadeex god ah, xataa dusha kama shaqayn karo masalo xididka laba jiraaban ah.
Quruxda xisaabtu waa in la fikiro, waa in aad qabato wax aanay mishiinadu samayn karo.
Aragtida Innumeracy waa eray uu sameeyey Douglas Hofstadter oo uu caan ka dhigay John Allen Paulos buugiisa 'Innumeracy - Aqoon la'aanta xisaabta iypo sameyneeda ee 1988.
Waa garasho la'aanta fikradda aasaasiga ah ee xisaabta oo dhawr heer oo khatar ah leh. Inaan la ogaan, in aan qofku xisaabin karin boqolayda, inaanu fahmayn garaafka.
Tuusale ahaan: dalka Spain waxa dhaqan ah in tigidho laga iibsado bakhtiyaa nasiibka Kirismaska.
Waxa jira dad safaf u gala goobo gaar ah oo ay is leeyihiin waa suurto gal inaad ka heshaan.
Waxay taasi muujinaysaa innumeracy (aqoon la'aanta xisaabta) in ay sannad kasta dhacdo.
Laakiin wakhtiga uun baad iska luminaysaa oo nooloshaada waxba saamayn kuma laha.
Waa maxay "Khilaaliga aqlabiyadda" sideed adigu u qeexday? Sidey arintani u xumaysaa xidhiidhka bulshada?
Way yara kakan tahay marka la barbar dhigo tiro la'aanta
Waa waxa ay ku sheegaan ceeryaan.
Waxay dhacdaa marka koox bulsho ah oo jirta ama mala awaal ah.
Waxay dhacadaa marka shabakadaha bulshadu ay leeyihiin awooda tabinta wararka beenta ah ama ku tidhi ku teenta ee aan la xaqiijin karin.
Dhibaatadu waxay tahay in ay adagtahay in la ogaado xisaabta aan la aqoon iyo saameynteeda.
Warka markuusan sal lahayn, waa dadaal ay tahay inaan dhamaanteen samayno.
Ka dibna dhanka kale waxay ina baraysa in aynu dadka u naxno.
Way fududahay in la yidhaa koox aanad ka mid ahayn, go'aamo xun bay gaadhaa.
Laakiin waxa suurto gal ah inaanay arkayn, sababta oo ah waa dhalaal habaabis oo saamaynaysa.
Waana sababta ay tahay sida ugu fiican in qofku ka baxo ceeryanta ama mala awaalkaa uu ku jiro oo dadka u naxo.
Markaan idhaa, waxan ahay cilmi baadhe xisaabeed waxay igu yidhaahdaan "laakiin maxaad ku ogaanaysaa? Waanu ognahay in laba laba loo geeyey afar tahaye".
Waxyaabo badan oo la ogaan karo ayaa jira waayo xisaabtu tirada way dhaafsan tahay.
Xaqiiqatan wax badan baa ka maqan. Wax kasta oo la ogaadaa albaab cusub buu furayaa.
Waxa xisaabta ka mid ah qayb cad oo natiijadeedu tahay in la ogaan karo maskaxda qofka ee laga hindisay.
Waxaan soo qaadanaa tirada, garaafyada iyo farsamooyinka kuwaas oo walxaha maanta jira ah.
Waxaan hindisnaa xeerarka ciyaarta kuwaas oo ah sida loo sameeyo sida la iskugu dhufto iyo sida la isugu qaybiyo.
Sharciyadaa iyo ciyaarta waxaan ka soo saaraynaa astaamo ay leeyihiin.
Image caption Albert Einstein
Waxa kale oo jirta qaybta xisaabta ah ee aan ku helno waxyaabaha dabeecadda ah.
Markii hore waxaa loo haystay in joometeri oo kali ahi jiray oo ahaa Euclidean geometry ee ah kan aynu wada garanayno ee labada xariijimood ee is barbar socdaa ay kulamaan ah.
Maalin ayaa qof ka fikiray: "hadii aan doonayno inaan ikhtiraacno joomateri oo aan ahayn ka xariijimaha is babarbar socdaa kama dambaysta ay kulmaan".
Waxay u muuqatay wax aan maskaxdu fahmi karin oo la sameeyey waagaa.
Laakiin markii dambe ayaa Albert Einstein macneeyey meesha iyo wakhtiga waxaanay noqotay in koonku arrintaa cadeeyey inay sax tahay: waa xisaabta qarsoon.
Lahaanshaha sawirka UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Sannadkii 2018-kii ayay koox cilmi baadheyaal ah oo aanku jiray helnay shaxda joometeri ee la yidhaa Scutoid taa oo saamayn culus yeelatay.
Waxaa iska kaashaday culimada bayoolojiga ee uniga oo noogu yeedhay sababtuna waxay doonayeen in ay ogaadaan sida ay u eeqi karaan qaabka uu u samaysan yahay unugga epithelial, kaas oo ah nud xubnaha jidhkoo dhan ku giblan.
Markaanu bilawnay inaanu qeexno shacdaa joometeri waxaanu garawsanay in qaabkaasi hore u jirin.
Waan ikhtiraaci karaa shax joometeri laakiin kan anagu maanu ikhtiraacin. Waxaanu eegnay uun unugga epithelial waxaanan ka goaanay qaabkaas uu u dhisanyahay.
Marar badan ayaanu xisaab ikhtiraacnaa mararka qaarna waxaanu ka helnaa inaanu koonka uun u fiirsano.
Nigeria oo sagaal bangi ka joojisay sarifaada lacagta
Maqal Maxaa loo fasiran karaa isla xisaabtan la'aanta xadgudubyada